arji si aad u hubiso tayada isticmaalkaaga: xaqiiqooyinka cuntada ee furan - TELEEFOONKA
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • Caadooyinka wanaagsan • DHAQAALAHA • WAXBARASHADA • DARYEELKA CAAFIMAAD »Codsi lagu hubinayo tayada isticmaalkaaga: xaqiiqooyinka cuntada ee furan
arji si aad u hubiso tayada isticmaalkaaga: xaqiiqooyinka cuntada furan
Eliseo Emma Kamgang 12 April 2019
Xaqiiqooyinka Cuntada ee Furan waa xog sugan oo ah badeecooyin cunto oo ay sameeyaan qof walba, qof walba.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso doorashooyin badan oo la ogsoon yahay, iyo maaddaama macluumaadka ay furan yihiin macluumaadka, qof kasta ayaa u adeegsan kara ujeedo kasta.
Xaqiiqooyinka Cuntada ee Furan waxaa diyaariya urur aan faa'iido doon ahayn oo ka madax banaan warshadaha. Xaqiiqooyinka Cuntada ee Furan waxay u furan tahay qof walba, qof walba, waxaana maalgeliya qof walba. Waad ku taageeri kartaa shaqadeena siinta xaqiiqda cuntada ee furan iyo sidoo kale adigoo isticmaalaya matoorka raadinta Lilo.
Xaqiiqooyinka Cuntada ee Furaha
Macluumaad wada shaqeyn, bilaash ah oo furan oo ku saabsan cuntada cuntada laga helo adduunka oo idil.
source: https: //fr.openfoodfacts.org/
taariikhda dhacdooyinka Abriil ee Faransiiska
Jeexa Jaalaha ah: ficilka 22 ee abaabulka